မီလန်မှရထားသို့မဟုတ်ရောမမြို့အားဖြင့်ရောမမြို့မှမီလန် အနေနဲ့လွယ်ကူပြီးအကျိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံ. မပြောလှ! သင်တစ်ဦးယူနိုင်ပါသည် စျေးနှုန်းချိုသာရထား အရာထက်ပိုကြာနိုင်ပါသည်3နာရီအနည်းငယ်ကြာပေမယ့်မီလန်ကနေရောမအထိရထားတွေကမင်းကိုခုန်ထွက်ခိုင်းစေတယ် လေ့လာစူးစမ်းရန်လိုအပ်သောမှတ်တိုင်များ. ဒါမှမဟုတ်သင်ကမရပ်မနား Trenitalia မြန်နှုန်းမြင့် Freccia ရထားပေါ်မှာခုန်နိုင်သည်, အရာပဲကြာ3နာရီနှင့်3မိနစ်များ, လေယာဉ်ဖြင့်အပြည့်အဝခရီးထက်အများကြီးလျော့နည်း! ဒီအမြန်လမ်းညွှန်ကိုသင်မည်သို့ပင်ဆုံးဖြတ်ပါစေသင်နှင့်သင်၏ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီလိမ့်မည်!
အကောင်းဆုံးရထားလက်မှတ်ပံ့ပိုးပေး: သင်တန်း၏တစ် ဦး ရထားသိမ်းဆည်းပါ
နှင့်အတူလန်အဖြစ်၎င်း၏မြို့တော်, ဒါကြောင့်ဧည့်သည်မှမိမိတို့၏သန်းပေါင်းများစွာအတွက်စုပြုံသောအအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ် Lombardi နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း. ဒါပေမယ့်ဖက်ရှင်အကြိုက်ဆုံးကျော်လွန်, များများရန်မဖြစ်မနေသွားရောက်ကြည့်ရှုအရပ်တွင်အ Lombardy အီငိုနေကြတယ်ခံရဖို့ထွက်သွားရောက်လည်ပတ်.
တြက္ႏလုပ်ဖို့အမှုအရာ၌ဤဒေသ; အတွင်းနစ်မြုပ်နေသောရဲတိုက်တွေရဲ့ရန် ပါရေကန်များ, စတုတ္ထတယောလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်သမိုင်းဝင်မြို့ကြီးများ, Mantua ၏အနုပညာနှင့်ဗိသုကာလက်ရာများကိုအံ့အားသင့်စေခြင်း - Lombardy သည် visitors ည့်သည်များအတွက်တကယ့်ကိုထုပ်ပိုးထားသည်.
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည် Emilia Romagna အလွယ်တကူပိုမို Tuscany နှင့် Lombardi ကျင်းပ၏ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ထွက်အစာစားခြင်းအဘို့အကမ်းလှမ်းမှု temptingly တတ်နိုင်ရွေးချယ်စရာကိုက်ညီခြင်းနှင့် နေရာထိုင်ခင်း. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ လန်မှရောမမြို့ကရထားခရီး အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်ဒါပေမယ့်လည်းရောမမြို့မှရထားဖြင့်မီလန်! ပယ်ခုန်ဒီမှာစခန်းသွားစူးစမ်း!
မိနစ် ၃၀ ထက်မက မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ဗင်းနစ်ကနေ, Padua လွန်းမကြာခဏအမှတ်ထဲကအများစု၏ဧည့်သည်. သေး, သဘာဝအဘို့အလွန်ကြီးစွာသောနေ့ခရီးစဉ်ကနေဗင်းနစ်, ယင်းသို့တစေ့တစောင်းကမ်းလှမ်း ကြွယ်ဝသောသမိုင်း တစ်ချိန်ကအင်အားကြီးစကားပြောရခဲ့သောမြို့များ၏.
နေအိမ်မှအီတလီနိုင်ငံ၏ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1222, Padua ပီးအဆူပွက်၏လေထုတကၠမြို့, သွက် Piazza နှင့် arcaded လမ်းများ, နေ့ကိုညဦးယံသို့ခငျြးကအတိုင်းနေရာအနှံ့ Spritz က de rigueur သည်အဘယ်မှာရှိကဖေးနှင့်ဘား၏ပဒေသာ. ထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့!
နယ်လှည့်မည်သူမဆိုအဘို့ Trenitalia ရထားနှင့်အတူမီလန်မှရောမသို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်ရှိအခြားလမ်းတစ်လျှောက်တွင်ရှိသည် ရှာဖွေနေများအတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအလွှာ, မကြာခဏ unarnarnished, နှင့်ရဲရင့်စစ်မှန် ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကို.
မင်းကိုဂျနူအာကိုသွားဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် (အရာလိုဗင်းတစ်ခါတုန်းကကောင်းတဲ့ရေကြောင်းသမ္မတနိုင်ငံ) fronting အ Ligurian ပင်လယ်. ပိုပြီးကုန်ကြမ်းများနှင့်စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်း, ရ undiluted သဘောမျိုး၏သမိုင်း, နှင့်မြို့တော်ရဲ့ကြွယ်ဝသောအနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစား ထူးဆန်းသောဗိသုကာ. ကျွန်ုပ်တို့ဤမျှလောက်ပျော်မွေ့ရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာထိုအရာဖြစ်သည် အဲဒီမှာအကြီးအအနုပညာနှင့်ပြတိုက် uncrowded များမှာ! သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဖြင့်အလုပ်လုပ် Caravaggio, ဗန် Dyck. ဗင်, Durer နိုင်လောက်အောင်အတွက်ခ Bianco နှင့်ခ Rosso နှင့်ပလတ်စတစ်တုံးအခြားကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့အတွက်များစွာတိုင်, လိုအခ Reale နှင့်အ Galleria Nazionale ရစ္ကခ Spinola. ရှိပါတယ်ကိုလည်းကောင်းဥပမာအ Genoese ကျောင်း၏အနုပညာ, 17 ရာစုအတွင်းထင်ရှားတဲ့, အခဒိုက်.
Trenitalia မြန်နှုန်းမြင့်မြန်နှုန်းမြင့် (AV) ရထားတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ရောမမြို့ Termini ဘူတာရုံများအတွက်တစ်နာရီလျှင်မီလန်ဗဟိုစခန်းစွန့်ခွာ - ပျှမ်းမျှ 90 ရထားတစ်နေ့လျှင်. အစောဆုံး Trenitalia ရထားရွက်မီလန်ဗဟိုဘူတာမှာ 5:00 နံနက်. ေနာက္ဆံုးရထားကိုမရွက်လန်မှာ 11:18 p.m.
အီတလီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်များတွင်အပိုထပ်ဆောင်းများရှိသည်. Frecciarossa နှင့် Frecciargento မီးရထားပေါ်ရှိစက်များနှင့် WiFi များကိုအားသွင်းရန်သင့်ထိုင်ခုံရှိလျှပ်စစ်ဆိုင်များ။. သို့သျောလညျး, သင်အတွင်း၌ရှိနေစဉ်အချက်ပြမှုကျလိမ့်မည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း နှင့်ဘူတာမှာ. ရထားတိုင်းမှာအစားအသောက်ကားထဲမှာအီတလီကဖေးကြီးတစ်ခုသင်ရှိသည်. အဖြစ်ကောင်းစွာဆောင်တတ်၏တဲ့အစားအသောက်လှည်းအဖြစ် မုန်, အသားညှပ်ပေါင်, နှင့်သင့်ထိုင်ခုံမှအဖျော်ယမကာ. အသီးအသီးကိုကားရဲ့အဆုံးမှာ, သငျသညျစတိုးဆိုင်တစ်ဦးသန့်စင်ခန်းများနှင့်ထိန်သိမ်း၏ပဒေသာတှေ့လိမျ့မညျ ကြီးမားသောအထုပ်အပိုး.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “Trenitalia ရထားနှင့်အတူမီလန်ရောမမြို့” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmilan-rome-train%2F%3Flang%3Dmy – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel byရာဝတီ မီလန် မီလန် ရိုးမား trainjourney travelrome